Mampianatra antsika Izy
"Ary ny aminareo, dia ilay hosotra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila hampianarin 'olona hianareo; fa satria ny hosotra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina, fa tsy lainga izany, dia tomoera ao aminy hianareo, araka ny nampianarany anareo" - 1 Jao. 2:27.
Ny Fanahy no mampianatra sy manazava mivantana. Na ny toriteny mahery vaika indrindra na ny famakiana ny Soratra Masina, dia tsy afaka hanova ny toetra sy mamonjy ny fanahy raha tsy miasa miaraka sy amin'ny alalan'ny olombelona ny Fanahy. Tsy tokony hanana endrika fitaomana ny olona iray hifantoka amin'ny tenany ihany ny lamin'asa sy ny tanjona. Ny Teny dia mahery, ary sabatra eo an-tanan'ny olombelona, fa ny herin'ny Fanahy no afaka mikasika ny saina. "Ary izy rehetra dia hampianarin 'Andriamanitra" . Andriamanitra no mampamiratra ny fahazavana ao am-po (...) Ny antony mahatonga ny fahafahan'Andriamanitra miasa ho antsika ho voafetra dia noho ny fanadinoantsika fa tokony hampiarahina amin'ireo fahatsarana velona ao amin'ny Fanahy Masina ny herin'olombelona. —Ms, 115a, 1897
Noho ny fahamarinana lehibe izay noraisintsika, ary noho ny herin'ny Fanahy Masina, dia adidintsika ary vitantsika ny ho fantsona lesona manapariaka fahazavana. Afaka manatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana isika. Dia ho hitantsika ny avan'ny fanekena, ka hiankohoka amin'ny fo torotoro isika, ary hikatsaka ny fanjakan'ny lanitra amin'ny firehetam-panahy izay hitondra ny voka-tsoany. Tokony horombahintsika izany, toy izay nataon'i Jakoba. Amin'izay dia ho herin'Andriamanitra ho famonjena ny hafatra torintsika. Ho vonton-kafanana ny fitalahoantsika, ho feno ny fahatsapantsika ny zavatra tena ilaintsika indrindra; ary hotoavina izany.
Ny fahamarinana dia hiseho eo amin'ny fiainantsika, sy nytoetsika, ary ny molotsika voatendrin'ny vainafo avy eo amin'ny alitaran'Andriamanitra. Raha miaina izany fanandramana izany isika, dia hasandratra hiala amin'ny izahontsika mahantra sy tsinontsinona, izay nankamamiantsika ery hatrizay. Hofongorantsika avy ao am-pontsika ny hery manimban'ny fitiavan-tena, fa ny fiderana sy fankasitrahana an'Andriamanitra kosa no hameno azy. Hanandratra an'Andriamanitra isika, dia ilay Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay nanandratra an'i Kristy. Dia haneho ny heriny amin'ny alalantsika Andriamanitra, ary hataony fitaovam-pijinjana maranitra eo amin'ny sahany isika. — RH, 14 Febroary 1899